လက်ပံတောင်းတောင် အရေးအခင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်းနဲ့ ဒေသခံပြည်သူတွေ ဆွေးနွေးကြတဲ့ ရုပ်သံမှတ်တမ်းလေးကို ကြည့်လိုက်ရပါတယ်။
“အရာရာမှာ သူတို့လောက်သိတာ ဘယ်သူမှ မရှိဘူး”လို့ အထင်ရောက်နေတဲ့ ၀န်ကြီးတချို့နဲ့စာရင် ပြည်သူတွေနဲ့ တန်းတူအပြန်အလှန် ဆွေးနွေး နားထောင်ပေးတဲ့ ၀န်ကြီးကို ချီးကြူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူရှင်းပြသွားတဲ့ တရုတ်ကို ကျေးဇူးတင်ရမယ့် (တနည်း ကြောက်ရမယ့်) အကြောင်းတရား နှစ်ပါးကိုတော့ဖြင့် သိပ်ဘ၀င် မတွေ့လှပါဘူး။ ရုပ်သံမှတ်တမ်းထဲက အမျိုးသမီးလေးကတော့ မကြောက်ဖို့ ပြောသွားပါတယ်။
၁။ ၁၉၈၈ အရေးအခင်းအပြီးမှာ တရုတ်ပြည် မူဆယ်လမ်းကြောင်းကနေ ကုန်တွေသွင်းပြီး အသက်ဆက်ခဲ့ရတယ်။
၂။ တရုတ်ကနေ ဗကပကို ထောက်ပံ့ထားတာတွေကို ဖြတ်တောက် ပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပထမအချက်မှာ ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်ဆက်ခဲ့ရတာလား… ယိုင်လဲသွားတဲ့ အစိုးရယန္တရားကို ပြန်အသက်ဆက်ခဲ့ရတာလား ဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ရှိပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တရုတ်ပြည်ကနေ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး လမ်းပွင့်သွားတယ်ဆိုတာက မြန်မာပြည်သူတွေထက် ကုန်းတွင်းပိတ်နေတဲ့ ယူနန်လို တရုတ်ပြည်နယ်တွေအတွက် ပိုပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်။ တကယ်တမ်းဆိုရင် တရုတ်ကတောင် ပြန်ပြီး ကျေးဇူးတင်သင့်ပါတယ်။ ကုန်သွယ်ရေးလမ်းတွေ ပိတ်သွားမှာကို တရုတ်ကတောင် ကြောက်ဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ အကယ်၍ တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းတွေ ပိတ်လိုက်ရင် ပထမ သုံးလေးငါးလလောက်တော့ (အရာရာမှာ တရုတ်ပစ္စည်းကို အားကိုးနေရတဲ့) မြန်မာပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်ကောင်း ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ပြည်တွင်းက အမျိုးသားပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းငယ်လေးတွေ ပြန်နလံထူလာစရာ အကြောင်းရှိပါတယ်။ တဖက်ကကြည့်ရင် ယူနန် ထွက်ကုန်တွေကို တရုတ်ပြည် ကမ်းရိုးတမ်းဖက်က ပို့ရရင် တန်ဖိုးထက် စရိတ်ပို ထောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် (မြန်မာပြည်ကို ပို့တဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ ထုတ်ထားတဲ့) ဒီကုန်တွေကို အခြားနိုင်ငံတွေ မဆိုထားနဲ့ ဖွံဖြိုးတဲ့ တရုတ်ပြည်နယ်တွေကတောင် လက်ခံ သုံးစွဲပါ့မလားဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာပါ။ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတွေ ရပ်ဆိုင်းသင့်တယ်လို့ ဆိုလိုတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ကျေးဇူး ကိုယ့် အပေါ်ရှိတာထက် ကိုယ့်ကျေးဇူး သူအပေါ်ရှိတာက များမယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာပါ။
တရုတ်က နယ်စပ်က လက်နက်ကိုင်တွေကို အထောက်အပံ့ပေးနေတာကို ရပ်လိုက်တယ်ဆိုတာကလည်း ကျေးဇူးတင်စရာ တခုလို့ မမြင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကို အနိုင်မကျင့်တာနဲ့ ကျေးဇူးတင်စရာမရှိပါဘူး။ အနိုင်ပြန်ကျင့်မှာ ကြောက်ရတယ်ဆိုရင်တော့ ဟုတ်ကောင်းဟုတ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ တရုတ်က အရင်ကတင် မြန်မာ့ပြည်တွင်းရေးကို ၀င်ရောက် စွက်ဖက်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်သူတွေ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အကူအညီရယူဖို့ ကြိုပမ်းတိုင်းမှာ တရုတ်က ဗီတိုအာဏာနဲ့ ၀င်ရောက် နှောက်ယှက်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်အစိုးရကို လက်နက် အထောက်အပံ့တွေပေးပြီး အာဏာရှင်စနစ် နှစ် တာရှည်စေခဲ့တယ်။ ဒီနည်းနဲ့လည်း တရုတ်က လက်နက်နဲ့ (လက်နက်ပေး၊ မြှောက်ပင့်ပေးပြီး) အနိုင်ကျင့်ခဲ့တယ်။ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာ ဗီတိုအာဏာနဲ့ ဖြစ်စေ၊ စီးပွားရေးအရ ခေါင်းပုံဖြတ်ပြီး ဖြစ်စေ အနိုင်ကျင့်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၁၉၈၈ မတိုင်မီရော ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းမှာပါ တရုတ်ဟာ မြန်မာပြည်တိုးတက်မှုရဲ့ အဟန့်အတား တခုအဖြစ် ရှိနေခဲ့တာ အမှန်ပါ။ အခုလို ပွင့်လင်းစပြုလာတဲ့အချိန်မှာ မြန်မာပြည်သား တိုင်းရင်းသားတွေ အချင်းချင်း မှန်ကန်တဲ့ တန်းတူညီမျှရေး၊ စည်းလုံးရေးကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ရင်၊ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀န်းရဲ့ သံတမန်ရေး ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေ ရယူနိုင်ခဲ့ရင် လက်နက်ပေးပြီး အနိုင်ကျင့်မှာကို ကြောက်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။ စီးပွားရေးအရ ၀ါးမြို အနိုင်ကျင့်မှာကို ဘယ်လို ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာသာ စနစ်တကျ ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
မှတ်ချက်။ ။ ဒီနေရာမှာ တိုင်းမဂ္ဂဇင်း ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာ စာဖတ်သူတစ်ဦး မှတ်ချက်ပေးထားတဲ့ တရုတ်ပြည်ရဲ့ ဗျူဟာကို အလျဉ်းသင့်လို့ ကူးပြီး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ The Chinese are using the 2B-tactics (bribery and bullying) combined with their basic 2Y-strategy (Yuan and Y-chromosomes) in order to split up ASEAN (a rather facile trick which the Chinese believe Sun-Tzu “invented” lol).
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော်ကတည်းက အမေရိကန်နဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ ပိတ်ဆို့ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး .. ကျမ မိတ်ဆွေတွေ (အထူးသဖြင့်နိုင်ငံခြားမိတ်ဆွေတွေ) နဲ့ အမြဲပြောဖြစ်တာလေးရှိတယ် ..
သူတို့ပိတ်လေ.. တရုတ်ကြိုက်လေ .. လို့လေ..အနောက်နိုင်ငံတွေ ပိတ်ဆို့လေ သူတို့အကြိုက်တွေ့လေ .. အဆီအနှစ်တွေ အလွယ်တကူ ခပ်ယူနိုင်ခဲ့တာကိုး..
တကယ်တော့ US နဲ့ ဥရောပ ကအိပ်ယာထတာ နဲနဲ နောက်ကျတယ်.. ကျောက်စိမ်းတွေ ကုန်တော့မယ် ..ဂက်စ်တွေ လဲ စာချုပ်ပြီးပြီ.
သစ်ပင်တွေလဲ ပြောင်သလင်းခါ ..မြစ်ကြီးရောင်းစားတာက ကံကောင်းလို့ လက်မတင် ကလေး၊ မြေတွေက ဈေးတွေ မိုးပေါ်ပျံတက်၊ လူမိန်းမ လေးတွေလဲ သတိထားနေရပြီ၊ ပိုဆိုးတာက အန္တရယ်အပြည့်နဲ့နယ်စပ်ကနေ အတားအဆီးမရှိဝင်လာနေတဲံ့ စားသောက်ကုန်တွေ.. ဘယ်သူမှတားရကောင်းမှန်းမသိ၊ မီဒီယာက (တရုတ်ထုတ်စားသောက်ကုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး) ပညာပေးတာမျိုးလဲ မရှိတော့.. မြန်မာပြည်က ကလေးတွေ ပြည်သူတွေ ရောဂါပေါင်းစုံ ဖြစ်လို့ ဖြစ်မှန်းတောင် မသိတဲံ့ ဘ၀.. ငါတို့ကဘယ်သူ့အကူအညီမှမလိုဘူး၊ ဘယ်သူ့ မှလဲမကြော်ဖူးလို့ ဆယ်စုနှစ်တွေ အတော်ကြာ အော်နေခဲ့တာ..နောက်ကနေ မကြောက်နဲ့ငါ ရှိပါတယ်ကွ .. လို့ပြောသူ ရှိလို့ပေါ့.. ဒီလူတွေပြန်ကြောက်တာ ဆန်းတော့မဆန်းလှပေဘူး.. ဒီဝန်ကြီးပြောတဲ့စကား က သူ့ပါတီကို ကိုယ်စားပြုတာဆိုရင်တော့.. အကုန်လုံး အထုပ်ထုပ်ပြီးအိမ်ပြန်နား သင့်ကြပြီ.ထင်တာပဲ.. မကြောက်တတ်သူတွေ ဆက်ဦးဆောင်လိမ့်မယ်.. သူအဲသလိုပြောတာကြားရတော့.၊ ငယ်ငယ်တုန်း (အထက်တန်းတုန်း)က တရုတ်စပ် ဆရာတယောက် အခန်းထဲမှာစာသင်ရင်းနဲ့ .. ဘယ်လိုစကားစပ်မိတယ်လို့တော့မမှတ်မိတော့ဘူး .ပြောတာက.. ဟေ့.. ငါတို့ မင်းတို့ မြန်မာပြည် .. သန်းငါးဆယ်တောင်မပြည့်သေးဘူး.. တရုတ်တွေ မင်းတို့ကို လုပ်ချင်သပ ဆို သေနတ်ထုတ်စရာမလိုဘူး..သူတို့လူတွေအကုန်လုံး နယ်စပ်နား လာ .. သေးပေါက်ချလိုက် ရင်.. မင်းတို့ အကုန်လုံး ပင်လယ်ထဲ ရောက်သွားမှာ.. တဲ့... ဒီဝန်ကြီးက ကျမဆရာနဲ့ အမျိုးများတော်သလား မသိ..း)...
အာဏာရှင်၊ ကြောက်စိတ်နှင့် တိုးတက်မှု
Myanmar Laksa အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ